Akụkọ - Ọrụ nke isi okpu na isi ihe
Nwere ajụjụ? Nye anyị a oku na-aga:0086-18831941129
Mmanụ Pank Gas
Ọrụ nke isi gasilin na ihe onwunwe
Isi gasket bu ihe di nkpa n'ime igwe oku. Isi mkpuchi gas na-eme ka nrụgide sitere na ọkụ ọkụ ọkụ na-anọgide n'ime ụlọ ọkụ. Thelọ ahụ na-ere ọkụ na-ebu pistons ma chọọ nrụgide dị elu iji hụ na piston ahụ nọgidere na-agba ọkụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Tụkwasị na nke a, mmanụ na coolant nwere ọrụ ndị dị mkpa, mana, iji rụọ ọrụ ha nke ọma, ha enweghị ike ịgwakọta. Isi mkpuchi gas na-eme ka ụlọ ahụ dị iche iche iji hụ na enweghị mmetọ mmiri.
Ọrụ nke gas cylinder gasket bụ: akara, nke bụ ihe na-agbanwe akara na-etinye n'etiti ngọngọ na isi isi. Ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịtọpụ kpamkpam n'etiti ngọngọ ahụ na isi isi, a chọrọ gasketị isi isi iji gbochie gas dị elu, mmanụ mmanu na mmiri jụrụ oyi ịgbanahụ n'etiti ha.
A na-ejikarị ihe eji emepụta sịlịnda gasị gasị ụzọ abụọ:
(1) matrọ asbestos ahụ e ji ọla kọpa na-eji asbestos eme ihe dị ka matrik ahụ ma jiri ọla kọpa ma ọ bụ akpụkpọ nchara kee ya. Somefọdụ na-eji waya a kpara akpa ma ọ bụ efere efere akpọgharịrị dị ka ọkpọ, ụfọdụ na-agbakwunye mgbanaka ọla gburugburu oghere cylinder iji mee ka ike ahụ dịkwuo elu. Ihe bara uru bụ na ọnụahịa dị ala, mana ike dị ala. N'ihi na asbestos nwere mmetụta carcinogenic n'ahụ mmadụ, a kwụsịrị ya na mba ndị mepere emepe.
(2) A na-eji akwa ọla na-eme ka ọ dị na mpempe akwụkwọ nchara, ma nwee mgbatị na-agbanwe agbanwe, nke a na-emechi site na mgbanwe nke riiji na ọrụ nke mkpuchi na-eguzogide okpomọkụ. A na-ejikarị mba ọzọ. Ihe ndị bara uru bụ ike dị elu, nsonaazụ akara dị mma, mana ụgwọ dị elu.
Dochie gasket isi abụghị ihe ị ga - eme n'ime ụgbọala. Ekwela ka nzuzu site na ịdị mfe nke isi gasket ka ị ga-ebukọta akụkụ niile nke injin iji ruo ya. Ọ kachasị mma ịhapụ ndị ọrụ a ọrụ a. Ihe ị hapụrụ bụ ibu ọrụ nke ịme ihe tupu ihe ka njọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, igbochi nnukwu gasket na isi nrụzi isi nwere ike ịrụ ọrụ oge niile nke usoro jụrụ oyi. Nyere ọnụ ala nke usoro sistemụ dị jụụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji dochie ha kama mgbe ọ dị mkpa wee na-akwụ ọtụtụ puku dollar maka mmezi ndị isi.
Ime ihe n'eziokwu na Pretụkwasị Obi, Ọnụ Ahịa na Ahịa Ndị Ahịa
Ọrụ nke isi okpu na isi di na nwunye ...